Cabitaanka Pepsi oo la sheegay in alkolo ay ku jidho | Somaliska
Shirkada Carlsberg ayaa qiratay in cabitaanka Pepsi si qaldan loogu daray alkolo gaaraysa 4,5% taasoo ah mid aad u badan. Cabitaanka ayaa qaasatan lagu iibiyay dukaamada LIDL oo Soomaalidu si weyn uga adeegtaan. Carlsberg ayaa hada sheegtay in ay dib u soo celiyeen dhamaan dhalooyinkii alkolada lagu daray.
“Raali galin ayaan ka bixinaysaa arinta dhacday. Arintaas waxaan u aragnaa dhacdo weyn oo baaritaan ayaan ku samaynaynaa” ayuu yiri Henric Byström oo ah afhayeenka shirkada Carlsberg ee Sweden.
Waxay intaas ku dareen in qofka dhadhamiya cabitaanka lagu daray alkolada uu dareemayo in ay ku jidho. Carlsberg ayaa ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee sameeya qamriga.
jimcaale sxb markaan aadaan kugu qoslay runtii hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh pepsi aa alcolo ku jirtaa iskadhaaf pepsi cola ee axey ku jirta alcolo daawooyinka la cuno oo dhan dhamaan kuwa xanuunbiiya ah ama kuwa ah xanuunada khatarta ah loo cuno mana ka maarmaan alcool markaa waxaan ku dhihi lahaa iska iloow paracetmol oo u yar oo aan isticmaalo eey ku jirtaa xataa alcool ku hhhhhhhhhhhh
Waaan u bahanhay Alkoholka waaaana cabeenaa Pepsiga waaba wax waaalan wixi soo qoray waxkale uu sheeego uu wayay.
Asxaabta pepsi ga cabto, maalmahaan qosolbadan ma isku aragteen? Kkkk
asc jimcale bro waa arin muhiima lkn arinka 2 sano wax wara kama heesid miyaa aniga adiga uunbaa war kaa sugnaa bro ee war aan kaa helno qasab maahan waase codsi
waa sax arinka labada sano ayaan kawar dhowreynaa wixii aad soo qorteen ee ahaa marso ayuu maxkamada go aan kasoo baxayaa waa mahadsantihin